ဂျမေကာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကဂျမေကာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) 2004 ၏ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေကအုပ်ချုပ်သည်။ LLC သည်တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းများကဲ့သို့အစဉ်အမြဲဘဝရဲ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဥပဒေရေးရာထိတွေ့ထူးချွန်ရှယ်ယာအပေါ်အကြွေးပမာဏကန့်သတ်ဖြစ်သကဲ့သို့၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များကန့်အသတ်တာဝန်ယူမှုကိုပျော်မွေ့။ အနှစ်သာရထဲမှာ, LLC တစ်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ပူးပေါင်း. အကြားတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားများ LLC ရဲ့ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်တကွလူအပေါင်းတို့၏ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကယင်း၏ဧကရာဇ်အဖြစ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ Queen Elizabeth II နဲ့ပေါင်းတစ်စည်းတည်းပါလီမန်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်အဖြစ်ဖော်ပြနေသည်။ 1962 ခုနှစ်, ဂျမေကာဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေး၏ 307 နှစ်ကြာဂရိတ်ဗြိတိန်ထံမှလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်က၎င်း၏တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဂျမေကာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်
• နိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့် 100% ပိုင်ဆိုင်မှု: LLC ရဲ့နိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင်သူတို့ရဲ့အစုရှယ်ယာအားလုံးရှိနိုင်ပါသည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များများ၏အမည်များမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသဘယ်တော့မှဖြစ်ကြသည်။
• အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်: အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်ရှိပါသည်။
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: ရှယ်ယာရှင်များ '' liabilities သူတို့ရဲ့ရှယ်ယာမြို့တော်ပံ့ပိုးမှုများကိုအပေါ်အကြွေးပမာဏကန့်သတ်ထားပါသည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ / တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်လည်းပိုပြီးထိန်းချုပ်များအတွက်သာညွှန်ကြားရေးမှူးနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကလိုအပ်သည်။
• အင်္ဂလိပ်: ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေး၏ 300 နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်, ဂျမေကာရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကသင်သည်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျမေကာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) အမည်
မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များတစ်ဦးအဆိုပြုကုမ္ပဏီနာမတျော၏ရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်. ဂျမေကာရဲ့ကုမ္ပဏီများရုံး (COJ) နဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအမည်အားကြိုတင်မှာကြားထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ် 90 ရက်ပေါင်းအထိကြိုတင်မှာယူမှုများနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။ အမည်ကြိုတင်မှာကြားထား LLC သည်အမည်အား reserved ဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီ သိ. Pre-ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ကန်ထရိုက်ထဲသို့ဝင်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါ COJ ကြောင့်ပြီးသားမှတ်ပုံတင်အခြားကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုနှင့်အတူစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်လျှင်မည်သည့်အဆိုပြုကုမ္ပဏီအမည်ကိုငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောဆေးဆိုင်အဖြစ်လိုင်စင်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်မှုခဲ့ရသည်, ကုမ္ပဏီအမည်များ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီလိုင်စင်ရဖြစ်လာဖို့လိုအပ်နေဆဲ။
ဒါကြောင့်အာမခံချက်သို့မဟုတ်အစုရှယ်ယာများကန့်အသတ်ပြုလုပ်လျှင် LLC က၎င်း၏ကုမ္ပဏီအမည်၏အဆုံးမှာစကားလုံး "လီမိတက်" တို့ပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, "LLC" ၏အတိုကောက်သုံးနိုင်တယ်။
အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်နံပါတ် (TRN), အမျိုးသားအာမခံအစီအစဉ် (NIS), နှင့်အထွေထွေစားသုံးမှုအခွန် (GCT): အဆိုပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ပုံစံကိုအလိုအလျောက်အောက်ပါအစိုးရအေဂျင်စီများနှင့်အတူသစ်တစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းက register လုပ်သွား။
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်ပျက်ကွက်ကြော်ငြာဖို့ကတရားမဝင်စေသည်, တရားစွဲမှုမှကုမ္ပဏီ၏လက်အောက်ခံ, ပိတ်သိမ်းခံရဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း subjects, နှင့်ကုမ္ပဏီဥပဒေရေးရာကုစားရှာနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာမှတ်ပုံတင်တစ်ဦးထံမှခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိရန်9စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းအထိကြာလိမ့်မည်။
ရှယ်ယာရှင်များ '' liabilities ရှယ်ယာမြို့တော်မှ၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးမှုများကိုဖို့ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏တရား၏တစ်ဦးတရားရုံးတွင်တရားစွဲသည်နှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပေးဆောင်ရမယ်လျှင်, ရှယ်ယာရှင်များ '' ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေရေးရာထိတွေ့ခြင်းမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဤသည်က၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေးရန်ကုမ္ပဏီပတ်ပတ်လည်မှာ "လက်စွပ်ခြံစည်းရိုး" ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအဖြစ်လူသိများသည်။
LLC သည်ယင်း၏ရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့်သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။ LLC သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နာမတော်၌ဂုဏ်သတ္တိများပိုင်ဆိုင်နှင့်တရားစွဲဆိုသို့မဟုတ်သီးခြားဥပဒေရေးရာဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ်တရားစွဲနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် LLC က၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များအနားယူသို့မဟုတ်သေဆုံးပြီးနောက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင်အပြောင်းအလဲကိုထံမှ 14 ရက်အတွင်း LLC ရဲ့ဒါရိုက်တာနှင့်ဒါရိုက်တာများမဆိုအပြောင်းအလဲများကိုများ၏အမည်များအကြောင်းကြားရပါမည်။
LLC ရဲ့ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဘုတ်အဖွဲ့ဖန်တီးသူတို့၏ဒါရိုက်တာများ (တစ်ဦးထက်ပိုညွှန်ကြားရေးမှူးလျှင်) ကစီမံခန့်ခွဲရသည်။ ဒါရိုက်တာ LLC သည်၏နေ့စစ်ဆင်ရေးမှနေ့ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အာဏာအပ်နှင်းထားပါသည်။ ဒါရိုက်တာ LLC သည်အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်နှင့်တကာသို့မဟုတ်နွှဲစီမံခန့်ခွဲမှုကနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရကြမည်။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့, ထိုကဲ့သို့သောသမ္မတအဖြစ်အရာရှိများခန့်အပ်ဘဏ္ဍာရေးမှူးနှင့်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်တာဝန်များကိုကိုင်တွယ်ရန်အတွင်းရေးမှူးခန့်အပ်ရမယ်ဖြစ်နိုင်သည်။
အချို့သောကိစ္စရပ်များကုမ္ပဏီမူဝါဒကနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလွန်သွားခဲ့သူရှယ်ယာရှင်များအားဖြင့်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်အဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ ရှယ်ယာမြို့တော်အထိပေးဆောင်နိမ့်ဆုံး $ 1 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
LLC ရဲ့ဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ တောင်းဆိုနေတဲ့ပြဌာန်းမှတ်တမ်းများနှင့်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများခပ်သိမ်းသောကာလမှာမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာထားရပေမည်။
တိုင်း LLC ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးကိုခနျ့အပျရမယျ။
LLC ရဲ့မှတ်ပုံတင်ဒေသခံစာရင်းစစ်ကိုခနျ့အပျရမယျ။ နှစ်စဉ်စာရင်းစစ်လိုအပ်ပါသည်။
တိုင်း LLC အခွန်အကြွေးမည်မဟုတ်ပါလျှင်ပင်တစ်အခွန်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
2013 ကတည်းကတစ်ဦးကို un-စညျးမဉျြးစညျးကမျးကုမ္ပဏီ 25% သည်နှင့်တစ်ဦးစညျးမဉျြးစညျးကမျးကုမ္ပဏီများအတွက်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကို 33% ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 25% ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုမှသူတို့ကိုအောက်ကို un-စညျးမဉျြးစညျးကမျးစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အများစုမှာ LLC ရဲ့အမူအကျင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အရာရှိများ၏မှတ်တမ်းများအများပြည်သူအဖွဲ့ဝင်များကုမ္ပဏီများမှအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အဘို့ထိုသူတို့ဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုအများပြည်သူဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် LLC ရဲ့ရှယ်ယာရှင်များများ၏အမည်များအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဒါရိုက်တာများ၏အမည်များအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာ LLC များအတွက်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်မှတ်ပုံတင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ဖို့ 10 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းအထိကြာနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဂျမေကာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည် 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ရှင်တွေ; တရားဝင်ဘာသာစကားအဖြစ်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, privacy ကိုအဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်, တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်များနှင့်အတူတူပင်လူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းဒါရိုက်တာနှင့်အင်္ဂလိပ်။